လျှပ်စစ်သန့်စင်ပေးသည့် brush - Ningbo Best-Home Imp ။ & Exp ။ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
နေအိမ် > > လျှပ်စစ်သန့်စင်စက်ကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်း
အသုံးပြုတဲ့အခါလျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးဖြီး, first applyalayer of cleanser on the skin or on the brush head of the လျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးဖြီး. When the brush head rotates, after the cleanser is fully foamed, you can massage and clean the skin inacircular motion. The use time is within 1-2 minutes. Be careful not to apply too much force to the brush head. နောက်ဆုံး၊ ပိတ်ပါswitch of the လျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးဖြီး and rinse your face with cold water.
ကျနော်တို့ကိုအသုံးမပြုခင်လျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးဖြီး, we must first soak the face. It is better to choose warm water to wash the face. It can fully open the facial pores and let the facial cleanser wash away the dirt in the pores, and then choose an appropriate amount of facial cleanser. You can squeeze the cleanser on the head of the လျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးဖြီး according to the instruction manual of the လျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးဖြီး. Generally, you can squeezeacleanser the size ofadollar coin.
ဤအချိန်တွင်ခလုတ်ကိုဖွင့်ပါလျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးဖြီး, turn the brush head of the လျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးဖြီး, fully foam the cleanser, and then put it on the face, massage the skin from the inside out, so that the cleansing face will be cleaner, the cleansing brush It should not stay on the face for too long. Generally, the time of using the လျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးဖြီး is 1-2 minutes. If you use the လျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးဖြီး for the first time, be careful not to wash it for too long, otherwise the face will feel painful.
နောက်ဆုံး၊ ပိတ်ပါလျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးဖြီးသင်၏မျက်နှာကိုရေအေးဖြင့်သုတ်။ ချွေးပေါက်များကိုကျုံ့စေပြီးအသားအရေကိုပိုမိုနူးညံ့စေသည်။